Gịnị kpatara o ji dị mkpa ịnwe mkpuchi mkpuchi ụlọ? | Akụkọ njem
Nacho Cuesta | | Atụmatụ
N'oge okpomọkụ na -enye ihe otiti ikpeazụ ya. Agbanyeghị, ezigbo ihu igwe yiri ka ọ bịara nọrọ na enwere ọtụtụ ndị na -eji ohere ezumike ikpeazụ emechi emechi n'oge ọkọchị ruo n'afọ na -abịa. Kedu atụmatụ kacha mma iji tinye mmetụ aka n'oge ọkọchị?
Otu n'ime atụmatụ kacha mma bụ ọgba tum tum. A na -agba ọtụtụ ndị mmadụ ume ka ha jiri ụgbọ ala n'ụdị a mee njem. Ma ọ bụghị maka obere n'ihi uru ọ na -enye dị ọtụtụ:
Enwere ike ịgagharị n'ọtụtụ ebe n'ime obere oge
Mgbanwe nke ịgaghị ejikọ ya na nbanye ma ọ bụ oge ịpụ
Atụkwala egwu maka ihu igwe, n'ihi na n'agbanyeghị ihe ọ na -eme nke ọma ma ọ bụ nke ka njọ, ụgbọ ala ndị a nwere sistemụ kpo oku n'ime. Ugbu a na COVID ha aghọọla ejiji, mana ee, mgbe gị na ya mere njem, ọ bụ iwu na ị ga -enwerịrị mkpuchi ụlọ.
1 Ebumnuche nwere mkpuchi mkpuchi ụlọ
2 Kedu mkpuchi nke mkpuchi mkpuchi ụlọ na -enwekarị?
Ebumnuche nwere mkpuchi mkpuchi ụlọ
Maa ụlọikwuu n'etiti ihe okike nwere nke ya, mana enwere ike nwee usoro ọnọdụ nke anyị na nke ndị ọzọ na, ọ bụrụ na ha emee ma anyị nwere mkpuchi maka ụlọ anyị, anyị nwere ike kwụsị ichegbubiga onwe anyị ókè.
Ị merie n'udo Ọ bụrụ na ị nwere kreenụ iji nyere gị aka ma ọ bụrụ na ihe emee, ma ọ bụ n'onwe gị ma ọ bụ site na mmetụta nke okike n'onwe ya dịka ọkụ, oke ifufe nke nnukwu agwa ma ọ bụ alaka dara, n'etiti ndị ọzọ
Ị na -ezere ịkwụ ụgwọ oke akụ na ụba n'ihe gbasara ndakpọ, izu ohi, ịpịa ụgbọ ala ma ọ bụ akụrụngwa ndị ọzọ yana ọbụnadị nke ndị ọzọ kụrụ ya
Kedu mkpuchi nke mkpuchi mkpuchi ụlọ na -enwekarị?
N'ozuzu, ọtụtụ mkpuchi ụlọ na -enyekarị ihe ndị a mkpuchi kachasị:
Ihe ọkwọ ụgbọ ala
Na -arịọ maka mmebi
Ndị agadi nwere ike gunyere ụdị mkpuchi ndị ọzọ nke nchekwa ka ukwuu dị ka izu ohi, windo gbajiri agbaji ma ọ bụ igwe anyanwụ, na ndị ọzọ.
Otu n'ime ụdị ndị ama ama bụ vans camper, nke ndị di na nwunye dabara adaba nke na -esokarị ha aga njem ụbọchị ole na ole. N'ọnọdụ ndị dị ka nke a, ọ kacha mma ị nweta akwụkwọ mkpuchi mkpuchi mgbazinye ụgbọ ala maka ụbọchị. Mana, ọ bara uru ị nweta mkpuchi ụdị a?
Maka nke a, a nyochaala ego ole ọ na -agbanwe mgbe ị na -ewere mkpuchi ụlọ maka ndị ọzọ na ihe egwu niile maka ụbọchị 7, 15 na 30.
Ụdị mkpuchi Ụbọchị 7 Ụbọchị 15 Ụbọchị 30
Nke atọ 35 - 54 € 60 - 130 € 126 - 195 €
Ihe egwu niile 84 - 95 € 179 - 198 € 292 - 332 €
Isi mmalite: Roams kwadebere site na Terránea.
N'ime mkpuchi nke atọ, ọnụ ahịa ya dị oke ọnụ ma ọ bụ dị ọnụ ala dabere ma ọ gụnyere enyemaka ụgbọ ala ma ọ bụ na ọ bụghị, n'otu n'otu. N'ihe gbasara mkpuchi mkpuchi zuru oke, a na -agbanwekwa ego dabere na oke mkpuchi. Yabụ, ọ bụrụ mkpuchi mkpuchi zuru oke yana oke € 200, ọnụ ahịa mkpuchi ahụ dị elu karịa nke mkpuchi nwere oke € 300.
N'ikpeazụ, a na -achọpụta na enweghị nnukwu mgbanwe n'etiti mkpuchi ụbọchị 7 ma ọ bụ 15. Dịka iwu n'ozuzu, iwere a mkpuchi ụlọ moto kwa ọnwa ga -adị ọnụ ala karịa na ngụkọta ego nke ego kwa ụbọchị Gịnị ma ọ bụrụ na ị na -eme ya otu izu ma ọ bụ izu abụọ. Yabụ, ọ ga -adị ọnụ ala karịa ụbọchị ị na -akwụ ụgwọ.
Na nke kachasị nke, ị nwere ike ị nweta mkpuchi ga -ekpuchi ndokwa ahụ n'efu ọ bụrụ na ihe emee gị na ndị enyi gị yana ụgbọ ala ị na -eme njem. Yabụ, ịgwọ ọrịa na ahụike bụ nhọrọ kacha mma maka ọdịmma mmadụ niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Atụmatụ » Gịnị kpatara o ji dị mkpa ịnwe mkpuchi mkpuchi ụlọ?